ဤသင်တန်းသည် 18 ရာစု ပြင်သစ်စာပေသမိုင်းနှင့် အတွေးအမြင်များကို အဓိကထားသင်ကြားပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ရာစုတစ်ခုလုံး၊ လက်ရာများနှင့် စာရေးဆရာများအပြင် ဉာဏ်အလင်းကို လွှမ်းခြုံထားသည့် အတွေးအခေါ်တိုက်ပွဲများကို တင်ပြရန် ရည်ရွယ်သည်။ ရာစုနှစ်၏ ယေဘူယျအတွေးအမြင်ရှိရန် လိုအပ်သော ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် “ကြီးကျယ်သောစာရေးဆရာများ” (Montesquieu, Prévost, Marivaux, Voltaire, Rousseau, Diderot, Sade…) ကို အလေးထားပါမည်။သို့သော် မကြာသေးမီက သုတေသနပြုထားသည့် အခြေခံလှုပ်ရှားမှုများတွင် မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အရာအားလုံးကို လျစ်လျူမရှုဘဲ စာပေပန်သီယွန်တွင် တစ်သီးပုဂ္ဂလနေရာနည်းပါးသော စာရေးဆရာများက ကိုယ်စားပြုသော အခြေခံလှုပ်ရှားမှုများ (မြေအောက်စာသားများ၊ လစ်ဘရတ်ဝတ္ထုများ၊ စာလုံးများဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသည်ဖြင့်)၊ .
အခိုက်အတန့် (ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ်) နှင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများနှင့် အဓိက လက်ရာများတွင် ၎င်းတို့ ပါဝင်လာပုံကို ရှာဖွေရန် အရေးကြီးသော ဗီဇပြောင်းလဲမှုများကို ရှာဖွေနိုင်သည့် သမိုင်းဘောင်၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဂရုပြုပါမည်။
18 ရာစု: ဉာဏ်အလင်းအတွက်တိုက်ပွဲ ဇန်နဝါရီလ 9th, 2022Tranquillus
ဖတ်ရန် သင်၏မျက်နှာကိုဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ YouTube ဖြင့်ရောင်းရပုံ
အောက်ပါ2022 ခုနှစ် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပြက္ခဒိန်
Shopify နှင့်အတူ Drophipping: သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောသင်တန်း!
အလုပ်ခွင်၌သေခြင်း - မည်သည့်လျော်ကြေးပေးသနည်း။